Xa siqala ulwalamano olutsha, sigcwele amandla kunye namandla, uthando olutsha lusishukumisela kwaye lukunceda ukuhlangabezana nazo zonke iingxaki size sikhohlwe ukusilela. Siyathuthuzela ngokulindela ukuba sihlangane kunye nesiqingatha kwaye sithande yonke iminithi esichithwa kunye.
Sifika emafini size siphupha, kwaye imini yokusebenza iqhuma ingabonakali, kwaye nangona ukukrokra okungazange kuphazamise indlela yethu yokuziphatha. Emva koko, silindele usuku lomtshato!
Kodwa ixesha lihamba ngokungahambi kakuhle, abantu bayasondela, bavule omnye nomnye kwaye bazana kakuhle, kwaye ngokukhawuleza okanye nawuphi na ulwalamano oluqinileyo lusetyenziswa kwinqanaba elibalulekileyo. Kubonakala ngathi uthando aluzange luphele, kodwa uthando luye lwaphela, uthando luye lwavela, kwaye kumntu othandekayo ezinye izihlandlo ezingathandekiyo zaqala ukubonakala. Siqala ukuphawula iimpazamo zayo, imikhwa ecasulayo, njl. Kwaye kulo mzekelo, ukugcina uthando kuyinkalo enzima, kodwa kuyimfuneko ukuba ufuna ukuba ubudlelwane bakho buhlale buqhakazile, lunomdla, kwaye aluyikukhathaza kwaye buyizintlu, ngokuqhubekayo kuholele ekuqhekekeni. Ngokuqhelekileyo, njengoko izazinzulu zithi, ukujika okunjalo kuvela emva kweminyaka emithathu emva kokuqala kwenveli. Kwiminyaka emithathu, naluphi na uthando oluya kuphelisa, kwaye mhlawumbi luya kuthatyathwa yintando, okanye iindlela zabathandi bexesha elide ziya kuhlakazeka ngeendlela ezahlukeneyo.
Kuthekani kuthi ukuba akukho ukuqonda okufanayo kunye nomthandayo? Abaninzi beengqondo kunye neengcali ezahlukeneyo kwiintsapho zentsapho bakholelwa ukuba umntu unokuvuselela ubudlelwane ngamazwi anomnene ngomntu othandekayo. Kubalulekile ukudumisa wakho okhethiweyo (ukuba ukhethwe), ukudumisa zonke iimpumelelo zakhe, kwaye ukutsho la mazwi ngokunyanisekileyo, ukunyanzela kwimeko enjalo akufanelekanga! Intando yakho inqume ukumangaliswa kwaye upheke ukutya? Nangona isitya sitshiswa kwaye ngokupheka siphekwe ngokungafanelekanga, akunandaba, kuba wazama kuwe! Ngoko ke ungabhekiseli kumagama anomusa, mbulela, bonisa ukuba kubaluleke kangakanani kuwe! Uyakwenza umntu abe mnandi, kwaye iimeko ezinjalo zizisa abathandanayo kunye, zivuselele iimvakalelo kuzo. Kwaye ukuba wena unalo ithuba lokuthanda umhlobo wakho, yenza kube lula kuye ukwenza imisebenzi ethile yasendlini, ungaphuthelwa ithuba, kwaye ubonise indlela oyithandayo kunye nokunyamekela ngayo. Futhi ungakhohlwa ukuncoma umthandayo, ugxininise ubufazi bakho okhethiweyo kunye neempawu zomntu weqabane lakho. Ngaba uncoma nje ngaleyo ndlela, ngaphandle kwesizathu, kodwa kwakhona ungalibali ngokunyaniseka ekusebenzelaneni nomthandayo.
Kwakhona, ukwenzela ukugcina ukuqonda ngokubambisana, kubaluleke kakhulu ukuzisa into entsha kunye necacileyo kwintsebenziswano, kungekhona ukuthobela i-gray routine. Ingakumbi ixhalabisa loo mabini abini abahlala kunye kunye nasemva komsebenzi wosuku olukhuni abuyele ekhaya, bafake njenge-lemon. Njengomthetho, akukho mandla asele ngokuhlwa, kwaye ngeveki esebenzayo abantu badinwa kakhulu kangangokuba yonke impelasonto ingabonakali kwiqhekeza kunye nokulawula kude kude kwi-TV ezandleni zabo. Kule meko, kuya kuba kuhle ukuqokelela amandla kwaye utshintshe imeko. Mema intombi yakho kwi-movie okanye kwindawo yokutyela, ulungiselele ukuhlwa yothando, ungabi buvila uze wenze into ekhethekileyo kuye! Unokuya kwindawo ethile engakukhunjulwayo bobabini, okuza kuzisa iimemori ezintle zexesha elidlulileyo. Ngokuqhelekileyo indawo efanelekileyo kakhulu apho uqala ukudibana okanye uwanga. Ndikholelwe, ngokukhawuleza xa uzithatha ngesandla uze uye kwindawo ethile nomhlobo wakho, ukukhathala kuya kuthatha isandla sakho! Kuya kuphinda ubuyeke uvakalelo oluthandekayo oluthandana.
Abantu abaninzi, emva kokudlula "ixesha le-candy-bouquet", khumbula ukuba izipho zinikelwe kuphela ngoNyaka omtsha kunye nokuzalwa. Izipho ezincinci kunye ezimnandi zihlala zifanelekileyo! Ekhethekileyo ngokukhethekileyo ngomphefumlo, ngentliziyo, ngomnqweno onyanisekileyo wokumangalisa umntu omthandayo, ukumnceda. Yenza isiqingatha esihle, mnike into encinci, kwaye uza kubona ukuba encinane kwaye, ngokuqhelekileyo, isinyathelo esilula singakwazi ukuvuselela ubudlelwane nothando.
Ngokuqhelekileyo, abathandanayo abahlala behlala behlala kunye kunye ixesha elide baye basebenzisana kakhulu kangangokuba sele benesifiso esinamandla sokuthintela rhoqo abo bathandekayo. Ngokuchanekileyo, lo mnqweno uyinto, kodwa ayithethi. Kodwa wonke umntu uyakuthanda ukuthinteka komntu othandekayo! Yaye ngokukhethekileyo umnandi ukuhlaziyeka okulula, okukwazi ukunika umzimba ithuba lokuphumla ixesha elide emva koxakekile. Kwaye kuya kuba kuhle ukuba abazithandayo abazange balondoloze ixesha lokubamba okukhawuleza kwaye bakhonkceze, kuba ukudibanisa ngokomzimba, njengokwenzululwazi, kukhuthaza ukudibanisa kunye nokuqonda okufanayo! Ngaloo ndlela, unokudibanisa ishishini kunye nolonwabo.
Ukuqonda ngokubambisana kunye nentanda ethandekayo, ngokugqithiseleyo, kubaluleke kakhulu ukuba abathandi abanakuzilibala ngokwabo, malunga nokuzithemba kwabo kunye nophuhliso lwabo. Sivame ukuzinikela ekuthandeni, ukunikela yonke ixesha lethu lokukhulula into yokudumisa kwethu, ukulibala ngokuzenzekelayo size sikhalaze, abayithandi, abayiqondi. Kodwa ukuze uhlale unomdla, kufuneka uzithande uze wenze okuthile! Ukuba unokwenza izinto zokuzilibazisa, ungazilahli, zenze, uphucule izakhono zakho, ungaphuthelwa ithuba lokufumana ukukhuthazwa emsebenzini. Ku luncedo kakhulu ukufumana izinto zokuzilibazisa apho iqabane lakho lingaboni, kwaye unokwenza yedwa okanye ngabahlobo abanengqondo efanayo.
Emva koko, ukuba uhlala unomnye uhlobo lwekona, indawo ethile ekhethekileyo, uya kuhlala ukhangeleka kumlingane wakho! Kodwa oku kuyinto elula, ukuhlala ihlala isitsha kwaye ingaqhelekanga. Yenza nje into oyithandayo ngovuyo, uvuyo! Khumbula ukuba ukuhamba ngaphaya kobudlelwane kuyimfuneko, okokuqala, ukuze ulondoloze ukutshatyalaliswa kobuhlobo kunye nomntu othandayo, kunye nokunikela ingqalelo ngokufanelekileyo kwintanda yakho kwaye, ngokuqinisekileyo, ukulahlekelwa yintsimbi yakho ethandekayo.
Kutheni abafazi bengenako ukutshata?
Imithetho yokukhanga, okanye sifuna ntoni ukufumana "ubuso" bobulili obuhlukile?
Iintlobo zowesetyhini kwingqondo
Indlela yokuphumelela nokukhusela ukungaphumeleli ekukhulisweni kwabantwana?
IHoroscope yoNyaka omtsha, ama-Aries
Isaladi kunye nengqolowa, ummbila kunye ne-apula
Indlela yokwenza iinjunu ezintle?